Vavolombelon’i Jehovah any Amin’ireo Tanin’i Amerika
MPONINA 980 780 095
MPITORY 4 034 693
FAMPIANARANA BAIBOLY 4 339 285
Kamboty maro be no nivory
Mipetraka any Suriname i Angela. Nitsidika an’ilay trano fitaizana zaza kamboty teo akaikin-dry zareo izy indray andro. Anabavy efa tsy mitory intsony no tompon’izy io, ka tonga dia navelany hitory tao i Angela. Ankizy 85 no niresahany, ary nampisehoany video tao amin’ny jw.org. Lasa nianatra Baiboly ny ankamaroan’izy ireo. Nanampy an’i Angela koa ny mpisava lalana roa, ary samy nampianatra ankizy maromaro izy ireo. Nilaza ilay anabavy tsy mitory intsony fa efa nampianariny hira avy ao amin’ny fihiranantsika ireo ankizy ireo, ary matetika no amakiany tantara avy ao amin’ny Baiboly rehefa alina. Te handeha hivory, hono, izy, saingy tsy azony ajanona irery ao an-trano ireo ankizy 85 ireo. Nalain’ireo Vavolombelona àry izy rehetra, ka nentiny tany amin’ny amin’ny Efitrano Fanjakana. Vita dia an-tongotra avy eo amin’ilay trano fitaizana zaza kamboty mantsy ilay efitrano. Mivory tsy tapaka izao ilay anabavy sy ireo ankizy 85.
Nampianarin’i Gabriel ny dadabeny
Paragoay: Gabriel, miresaka amin’ny dadabeny
Avy nanatrika fivoriamben’ny vondrom-paritra i Gabriel, ankizilahy enin-taona any Paragoay. Tsapany hoe tena zava-dehibe ny mitory ny vaovao tsara. Lasa tany amin’ny dadabeny ny eritreriny. Mba tiany hiaraka aminy any amin’ny Paradisa mantsy izy io. Tsy tia fahamarinana mihitsy anefa ilay dadabeny, ary na ny vady aman-janany, izay Vavolombelona, aza toheriny.
Tamin’io andro io ihany dia nasain’i Gabriel niantso an’ilay dadabeny tamin’ny Internet ny ray aman-dreniny, ka sady miresaka amin’ilay dadabeny izy no mahita azy. Mipetraka any Arzantina mantsy ilay dadabeny. Nohazavain’i Gabriel taminy fa tena ilaina ny mianatra Baiboly. Hoy izy avy eo: “Tian’i Dadabe ve raha izaho no mampianatra Baiboly an’i Dadabe?” Nanaiky izy ary ilay bokikely hoe Mihainoa An’Andriamanitra dia Hiaina Mandrakizay Ianao no nianaran’izy ireo. Naharitra volana maromaro izany. Samy nanomana mialoha be izy ireo satria samy tsy dia nahay namaky teny. Omanin’i Gabriel foana koa ny lesona, ary nanao lobaka sy kravaty izy rehefa hianatra izy ireo.
Nitsidika an-dry Gabriel ny dadabe sy bebeny, tatỳ aoriana. Nijanona tany herinandro vitsivitsy izy ireo, ary nandeha nivory niaraka tamin-dry Gabriel. Rahalahy tany Arzantina indray no nampianatra ny dadabeny, rehefa nody tany izy. Nandroso izy ka lasa mpitory tsy vita batisa. Miara-mivavaka foana izao izy mivady isan’andro. Nandroso tsara koa i Gabriel kely, ka lasa mpitory tsy vita batisa. Efa maniry hatao batisa izao ilay dadabeny, mba hampisehoana hoe efa nanokan-tena ho an’i Jehovah izy.
“Tsy kisendrasendra iny ianao tonga iny”
Mipetraka any Brezila i Jennifer. Indray andro izy nizara an’ilay taratasy mivalona hoe Mbola ho Velona Indray ve ny Maty? Nandondòna tao amin’ny trano iray izy. Ramatoa iray no tao, nefa izy efa maika hamonjy ny fandevenana an’ilay namany tsy foiny. Nilaza i Jennifer fa taratasy mivalona momba an’izany mihitsy no saika homeny, ary resahina ao hoe mbola ho hitantsika indray ny namantsika efa maty, indray andro any. Tsy nahateny ilay ramatoa rehefa nahita an’ilay lohateny, fa noraisiny fotsiny ilay taratasy mivalona. Nanontanian’ilay anabavy izy raha azo ampitondraina taratasy mivalona maromaro ho an’ilay fianakaviana mana-manjo. Hitany hoe hevitra mety izany, ka nanaiky hitondra sivy fanampiny izy.
Hoy ilay ramatoa rehefa tonga tany indray i Jennifer: “Vao nisaraka kelikely isika tamin’iny, dia tonga saina aho hoe tsy kisendrasendra iny ianao tonga iny. Andriamanitra mihitsy no naniraka anao mba hampahery ahy, satria nalahelo be aho tamin’iny.” Tapitra voazarany ireo taratasy mivalona. Ny iray tamin’ilay fianakaviana aza namaky an’ilay izy hatramin’ny farany tamin’izy nanao toritenim-pandevenana. Tia an’ilay izy daholo, hono, ny olona ary nisaotra an’ilay ramatoa tamin’ilay hafatra nampahery. Nanaiky hianatra Baiboly ilay ramatoa.
Nitory tao anaty tap-tap
Misy taxi-be mareva-doko atao hoe tap-tap any Haïti. Nandeha tamin’izy ireny ny Betelita telo, indray andro, ary naharitra adiny roa sy sasany ny dia. Noresahin’izy ireo tamin’ny mpandeha hafa ny fampanantenana momba ilay Fanjakana, ka gazety 50 sy taratasy mivalona 30 no voapetraka. Iray tamin’ireo Betelita ireo i Gurvitch. Namakiany ampahana lahatsoratra tao amin’ny Mifohaza! ny mpandeha iray. Nandre an’izany ilay tovolahy atao hoe Pépé, ary tonga dia niditra tamin’ilay resaka. Nangataka ny hampianarina Baiboly izy. Hay koa izy mipetraka ao amin’ny faritanin’ny fiangonana misy an’i Gurvitch. Saika ny fivoriana sy fivoriambe rehetra mihitsy no natrehin’i Pépé, hatramin’ilay izy notsidihina voalohany tamin’ny Janoary 2014. Efa miresaka ny zavatra inoany amin’ny hafa izy izao, ary manantena ny ho lasa mpitory tsy vita batisa tsy ho ela.